पक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/पक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित !
काठमाडौं । भारतीले आफुले गाँ’जा पि’उने ग’रेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । एनसीबीले गाँ’जा रा’खेको आरोपमा चर्चित हास्य कलाकार भारतीलाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार, एनसीबीले मुम्बईमा ३ स्थानमा छापा मारेपछि गाँ’जा फे’ला पारेको थियो ।
हास्य कलाकार भारती र उनका पति हर्षको घरमा पनि छापा मार्दा गाँ’जा समातिएको थियो । भारतीको फ्ल्याटबाट उक्त गाँ’जा ब’रामद भएको हो । भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचियालाई एनसीबीले बोलाएको थियो ।
लामो सोधपुछपछि भारतीले गाँ’जा से’वन ग’रेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । यद्यपि हर्षलाई सोधपुछ गर्ने क्रम जारी रहेको छ । भारती द कपिल शर्मा शो की चर्चित कलाकार हुन् । अब उनि शोमा रहने नरहने भन्ने कुरा अन्यौल भएको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
पछिल्लो जानकारी अनुसार एनसीबीले भन्यो कि भारतीको घरबाट ८६.५ ग्राम गाँ’जा ब’रामद गरिएको छ । साथै, सोधपुछको क्रममा ती दुबै जनाले गाँ’जा हो भनेर स्वीकार पनि गरेका छन् । उनीहरू दुबै जनाले गाँ’जा से’वन गर्ने गरेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् ।
यसले भारतको प्रहरी नै चकित बनेको छ । यो प्रकरणले अहिले भारतलाई तताएको छ । यो तहका कलाकारसम्म यस गलत कार्यमा फसेको प्रमाणले सबै चकित बनेका छन् । बयानले प्रहरीपनि चकित भएको छ ।
लिपुलेक हाम्रै हो, जनगणना गर्ने मै हुँ : वरिष्ठ पत्रकार रिसाल
सुस्मिताको आमालाई एक्कासी यस्तो, सहयोग रकम दिदै आक्रो,शित, ह,त्यारालाई यस्तो सजायँ माग (हेर्नुहोस भिडियो)
पाकिस्तानमा अमेरिकी नागरिकलाई अदालतभित्रै ६ गो’ली
दशैं नजिकिदै गर्दा भर्खरै आयो खुसीको खबर